သမိုင်းဖြစ်စဉ် | Union Attorney General’s Office Skip to main content
၁၈၂၆ခုနှစ်၊ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာပထမစစ်ပွဲပြီးချိန်မှစ၍ ဗြိတိသျှတို့သည် ယင်းတို့၏အင်္ဂလိပ်ရိုးရာဥပဒေစနစ်ကို ပြုပြင်ထားသည့် ဥပဒေစနစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်ကျင့်သုံးခဲ့ပြီး၊ အစိုးရရှေ့နေချုပ်တစ်ဦး၊ အစိုးရ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများနှင့် အစိုးရရှေ့နေများကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှုခင်းများ နှင့် တရားမမှုများတွင် နိုင်ငံတော်ကိုယ်စားလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရန် ခန့်ထားခဲ့ပါသည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရ သည့်အခါ ၁၉၄၇ခုနှစ် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ၁၉၄၈ခုနှစ် နိုင်ငံတော် ရှေ့နေချုပ် အက်ဥပဒေတို့အရ ရှေ့နေချုပ်ရုံးကို တည်ထောင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၂ခုနှစ်တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီအစိုးရက နိုင်ငံတော်တာဝန်များကို ဆက်ခံဆောင်ရွက်သည့်အခါ ရှေ့နေချုပ်ရုံးသည် ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်အထိ ရှေ့နေချုပ်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ မှုခင်းများနှင့်တရားမမှုများတွင် နိုင်ငံတော်ကိုယ်စား လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အစိုးရကို ဥပဒေအကြံပေးခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ယခင် တည်ရှိခဲ့သည့် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကိုဖျက်သိမ်းသည့်အခါ ရှေ့နေချုပ်ရုံးကို အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး၊ အမှုလိုက်ခြင်း၊ ဥပဒေအကြံပေးခြင်း၊ ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဥပဒေဘာသာပြန်ခြင်း တာဝန်များဆောင်ရွက်ရန် အပ်နှင်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက် ၁၉၇၄ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုကျင့်သုံးခဲ့ပြီး၊ ပြည်သူ့ဥပဒေအကျိုးဆောင် အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၄ခုနှစ် ပြည်သူ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များအရ ဗဟိုဥပဒေရုံး၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဥပဒေရုံးများ၊ မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၈ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ် ပိပြားမှုတည် ဆောက်ရေးအဖွဲ့က နိုင်ငံတော်တာဝန်များ ရယူသည့်အခါ ၁၉၈၈ခုနှစ်၊ ရှေ့နေချုပ် ဥပဒေကိုပြဌာန်းပြီး၊ ရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဥပဒေရုံးများ၊ မြို့နယ်စု(ခရိုင်) ဥပဒေရုံးများ နှင့်မြို့နယ်ဥပဒေ ရုံးများ ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ရှေ့နေ ချုပ်ရုံးခွဲ(မန္တလေး)၊ ပြည်နယ် ဥပဒေရုံးခွဲ ၂ရုံးနှင့် တိုင်းဥပဒေရုံးခွဲ ၁ရုံးတို့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၁ခုနှစ် ရှေ့နေချုပ်ဥပဒေသည် အချိန်အခါနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် သမိုင်းအတွေ့ အကြုံနှင့် လက်တွေ့များအပေါ် အခြေခံထားသည့် ဥပဒေဖြစ်ပါသည်။ ယင်းဥပဒေကို ၂၀၀၃ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၀ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၈ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ဥပဒေကို ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၈ခုနှစ် မေလ(၂၉)ရက်နေ့တွင် ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲကြီးဖြင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို အတည် ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၄၃ နှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုရှေ့ နေချုပ်ဥပဒေအား ၂၀၁၀ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ၂၈ ရက်နေ့ တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ ပါသည်။
ယင်းဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ် နှင့် ဒုတိယ ရှေ့နေချုပ် တစ်ဦးအား နိုင်ငံတော် သမ္မတ ကခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် သည် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ ဝင်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော် သမ္မတအား တာဝန်ခံရပါသည်။
ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ် ဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်အား ဥပဒေဘာသာပြန်ဆိုခြင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အပ်နှင်းခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်အား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များတို့တွင် ပါဝင်သင့်/မသင့် စသည်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် နိုင်ငံအများပါဝင်သည့်စာချုပ်များ၊ နားလည်မှုမှတ်တမ်းများ၊ နားလည်မှုသဘောတူညီချက်များ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းများ၊ အခြားစာချုပ်စာတမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများအား ဥပဒေအကြံ ပေးခြင်းကိုလည်းကောင်းဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်သည် ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှုခင်းများတွင် အစိုးရရှေ့နေဖြစ်ပြီး အစိုးရပါဝင်သည့် တရားမမှုခင်းများကိုလည်း အစိုးရဘက်မှလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၇၈(က) အရ နိုင်ငံသား၊နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ စာချွန်တော်အမိန့်ထုတ်ဆင့်ပေးရန် လျှောက်ထားမှုများတွင် နိုင်ငံတော်ဘက်မှလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရပါသည်။
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ၂၆၆ အရ နိုင်ငံတော် သမ္မတသည် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်က ဥပဒေ အကြံဥာဏ်များ ရယူနိုင်ရန်နှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာတာဝန်များ ပေးအပ်နိုင်ရန် ၀န်ကြီးချုပ်က သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် တင်ပြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အား တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဥပဒေချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန် ပေးပါသည်။ ယင်းပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ဥပဒေက ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ယခင် ရှေ့နေချုပ် ဥပဒေများနှင့် မတူညီကွဲပြားသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက် များဖြစ်ပါသည်။
ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် အဆင့်ဆင့်သော ဥပဒေရုံးများမှ ဥပဒေအရာရှိများ ဥပဒေဆိုင်ရာ သုတေသန အမျိုးမျိုး ကိုလေ့လာခြင်း၊ ပြုစုခြင်း ဆောာင်ရွက်နိုင်ရန် ဥပဒေအနှစ်ချုပ် စာအုပ်များကို မြန်မာဘာသာဖြင့် လည်းကောင်း၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် လည်းကောင်း ပြုစုထုတ်ဝေခြင်းနှင့် ဥပဒေဂျာနယ်၊ ဥပဒေဝေါဟာရ အဘိဓာန်နှင့် အခြားဥပဒေ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ပြုစုခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။ ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးသည် ယင်း၏ အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကို ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်အချို့ကို အီလက်ထရောနစ်စီမံချက်အရ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးသည် ဥပဒေအရာရှိများက ယင်းတို့၏တာဝန်များကို စနစ်တကျစည်းကမ်းရှိစွာဖြင့် ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ လိုက်နာကြစေရေးအတွက် ”ဥပဒေပညာသည် အကျင့်သိက္ခာနှင့် ပြည့်စုံသော ပညာဖြစ်သည်” ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်ကိုလမ်းညွှန်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါသည်။
တရားမျှတမှုကိုဖော်ညွှန်းကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ချိန်ခွင်ပုံပါသော ရင်ထိုးတံဆိပ်နှင့် ”ဥပဒေ” ဆိုသည့်အပြာရောင် စာသားကို အဖြူပေါ်၌ ရေးသားထားသော ရင်ထိုးတံဆိပ်တို့ကိုလည်း ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ အမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ဝတ်ဆင်စေပါသည်။
697556Since: 08/01/2013 - 19:50 Copyright © 2013 - 2017 Union Attorney General’s Office. All rights reserved. Powered by : Information Matrix